Ny vina Fisandratana no hahavonjy an’i Madagasikara - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny voalohany dia ny Filoham-pirenena irery no nandray fitenenana teny. Tsy nandray fitenenana ny vahiny (ambasadaoro…) na solontenan’ny andrim-panjakana indrindra ny praiminisitra vaovao Ntsay Christian.
Ny faharoa asongadina dia hita fa nohararaotin’ny Filoha Rajaonarimampianina ny lahateny nataony nanambarany fa misy ary tsara ny vina Fisandratana 2030. “Tena misy ny vina Fisandratana 2030” hoy tokoa ny filoha Rajaonarimampianina. “Tsy tahaka ny an’ny sasany izay resabe. Efa misy ny famatsiam-bola amin’io vina io. Efa nanomboka ny fanatanterahana azy. Azon’ny tsirairay hamarinina ny tarehimarika voarakitra ao anatin’ny vina Fisandratana 2030” hoy ny filoha tao anatin’ny kabariny.
Dia nitanisa tarehimarika maromaro ny filoham-pirenena tao anatin’ny kabariny. Nambarany fa hiteraka asa maherin’ny 5 tapitrisa ny vina hatramin’ny taona 2030. Izany hoe hitombo avo telo heny izany ny fahefa-mividin’ny malagasy mandritra io vanim-potoana io. Ary maherin’ny 70%-n’ny malagasy no ho afaka ao anatin’ny fahantrana. Tsy kobaka am-bava izany hoy ny Filoha Rajaonarimampianina. Nambarany fa ny vokatra azo tao anatin’ny 5 taona nitondrany dia afaka raisiny ho porofo. Raha 18,1% ny PIB tamin’ny taona 2013 dia niakatrra ho 21,6% izany ny taona 2016 ary raha 3,3% ny harin-karena faobe ny taona 2014 dia maherin’ny 5% izany ny taona 2017.
Manoloana izany fahombiazana izany sy ny fitsinjovana ny vokatra tokony ho azo amin’ny taona 2030 dia mampitandrina ny filoha manoloana ny fisian’ireo mpaminany sandoka. “Mitandrema manoloana an’ireo mampanantena lanitra ary mitaona ny vahoaka ho atao sorona eny andalambe” hoy ny filoha Rajaonarimampianina. Nisaotra ny vahoaka tsy nanaiky nanaraka an’ireo mpaminany sandoka ireo koa izy nandritra ny kabariny. “Tsy nanaiky hanovana ny fahaleovana ho lasa fahalovana ny vahoaka” hoy ny Filoha.
Nilaza ny filoham-pirenena fa misy dia misy tokoa ireo olona mpanararaotra ny fahoriam-bahoaka ka ny ezaka fananganana zary lasa ady ho fanonganana. “Manoloana ireo mamorona ady ireo dia mila mamboly ny kolontsain’ny fisandratana na culture d’émergence isika ary manambatra ny hery mba tsy ho diso fahavalo” raha fintinina ny nambaran’ny filoham-pirenena tamin’ny kabariny tamin’ny fiteny frantsay.
Ho an’ny Filoham-pirenena dia misy tokoa ny olon-dratsy tsy mitsaha-mikendry ny hanapotika ny firenena. “Tsy takona afenina mantsy fa nandetika sy nampihemotra hatrany ireo krizy nosedraina, tsy afa-nitozo ny ezaka, tsy hita lany ny fahasahiranana, tsy mbola resy ny fahantrana.” hoy Hery Rajaonarimampianina.
“Miantefa amin'ireo mpisehatra politika rehetra izany fampiheritreretana izany. Tsy ho antendro-molotra fotsiny intsony ny hoe Madagasikara mahaleotena ka tsarona androany, fa tena hifamatotra amin'ny Fisandratan'ny firenena. Izay no himatimatesantsika amin'izao fotoana izao. Fantatra, hita sy re ireo hikiaka sy talaho ary famaliana izany indrindra no nilofosana tao anatin’ny efa-taona sy tapany. Vavolombelona avokoa isika rehetra, fa tao anatin'ny 4 taona izao, no nanombohantsika ny fametrahana ireo fototry ny fampandrosoana. Mba ahafahana miantoka amin'ny fomba maharitra ny fanatsarana ny fiainan'ny isantokatrano, tsy maintsy ireo fototra aloha no hamafisina.” Hoy ny filoha tao anatin’ny kabariny.
“Izany no naharesy lahatra ny Filoham-pirenena fa tsy ampy ny hoe Fahaleovantena fotsiny, amin'ny vava, amin'ny fety aman-danonana, tsy ampy izany fa tsy maintsy miaraka amin'ny fahavonononantsika hisandratra. Fisandratana, izay mifototra amin’ny vina matotra, mazava, ary efa tanterahina amin’ny alalan’ny asa mba tena hipàka any amin'ny fiainam-bahoaka.”
Nasian’ny fitenana koa ny momba ny toe-tsaina. Hoy indrindra izy : “Tsy mendrika ny olom-boafidy, tsy mendrika ny vahoaka malagasy, tsy mendrika izay heverina fa ray aman-dreny, ny manaratsy, manompa, manivaiva ary manosihosy ny hasina maha-olona amin'ny lahateny na fanehoan-kevitra izay atao, tahaka izay nitranga tato ho ato.” Ary notohizany izany manao hoe : “Tsy hisy dikany ny fametrahana fotodrafitr'asa fototra sy maharitra, tsy misy antony tokony hiadiantsika fo aman'aina mba hampilamina sy hampitony ny firenena, ahatonga ny fahaleovantenatsika mba hitera-boka-tsoa marina ho an'ny vahoaka malagasy, raha toa ka ny kolotsaina mifototra amin'ny fahendrena ny soatoavina sy maha-malagasy izay mifamatotra amin'ny fifanajàna sy ny fifampitsinjovana no potika.”
Nosoritany tao anatin’ny kabariny fa “Singa lehibe ao anatin'ny Fisandratana ny fivoaran’ny toe-tsaina sy ny fomba amampanaon’ny mpiasam-panjakana tsirairay avy.”
Mitory fa ho kandida indray ve ny olom-pirenena Rajaonarimampianina izay nanambara fa santatra no vita tao anatin’ny efa-taona ? Sa hanimpy ny fanohizana ny asa amin’ny hafa raha nilaza fa tsy azy ny vina Fisandratana 2030 ? Ho hita eo ny tohiny.